मर्निङ वाक ? सबेरै नगर्नुस् - TESTING NEWS
Home / health / मर्निङ वाक ? सबेरै नगर्नुस्
मर्निङ वाक ? सबेरै नगर्नुस्
पुस ८, २०७२- चिकित्सकहरूले सबेरैको चिसोमा ‘मर्निङ वाक’ गर्नु जोखिमपूर्ण भन्दै त्यसबाट जोगिन सुझाएका छन् । घाम लागेपछि मात्रै शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
बिहानैको चिसोमा मुटुरोग, अनियन्त्रित रक्तचाप, दीर्घरोग, पक्षाघात लगायतको जोखिम बढी हुने भएकाले कुहिरो वा घाम उदाउनुअघि ‘मर्निङ वाक’ नगर्न उनीहरूले सचेत गराएका हुन् । चिसो बढिरहेकाले जाडोबाट बच्न विशेष सावधानी अपनाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
चिसो पक्षाघात (प्यारालाइसिस) रोगसमेत बढेको वरिष्ठ स्नायु शल्यचिकित्सक डा. वसन्त पन्तले बताए । अस्पतालको आईसीयू र वार्डहरू पक्षाघात (स्ट्रोक) का बिरामी बढेको उनले जनाए । ‘दिनहुँ मस्तिष्कको शल्यक्रियाको चाप बढेको छ, अहिले तापक्रम शून्यमा पुग्दा उत्कर्षमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘चिसोसँगै रक्तचाप बढ्छ, नियन्त्रण नभए पक्षाघातको समस्या देखिन्छ ।’
मुटुरोग विशेषज्ञ डा.ओम मूर्ति अनिलका अनुसार चिसोले उच्च रक्तचाप, ह्दयाघात लगायतका समस्या बढेका छन् । पक्षाघात त्यतिखेर हुन्छ, जब अचानक मस्तिष्कको कुनै भागमा रगतको आपूर्ति बन्द हुन्छ वा मस्तिष्कको कुनै रक्त बाहिनी च्यातिएर मस्तिष्क छेउछाउमा रगत जम्मा हुन्छ ।
‘धेरै चिसोबाट बच्नुपर्‍यो, कुहिरो वा घाम नलागेका बेला मर्निङ वाक गर्नु भएन,’ डा. पन्तले भने, ‘धूमपान र ब्रेन हेमरेजबीच सम्बन्ध देखिएकाले अम्मलीले त झनै विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’ यस्ता जोखिममा भएकाले बढी चिसोमा मोटरसाइकल यात्रा गर्न नहुने सुझाव पनि उनको छ ।
‘अर्को कुरा चिसोमा शरीरमा पानीको कमी हुन दिनु हुँदैन, प्रशस्त मात्रामा मनतातो पानी पिउनुपर्छ,’ उनले भने । शारीरिक गतिविधि न्यून, खानपिन बढी, तौल बढ्नेलगायतले रक्तचापको जोखिम जाडोमा बढी हुने उनले बताए।
डा.ओमका अनुसार मुटुरोगी, रक्तचाप नियन्त्रण नभएकाहरू, बूढापाका, मृगौला, मधुमेह, दम लगायतका दीर्घरोगी घाम उदाएका बेला अर्थात् बिहान ९ बजेदेखि साँझ ४ बजेबीचमा एक/दुई घण्टा हिँड्नु जरुरी छ । विज्ञहरूका अनुसार जाडोयाममा नियमित रक्तचाप परीक्षण आवश्यक छ ।
यो मौसममा कुनै पनि अवस्थामा रक्तचाप, रगत पातलो गर्ने एस्प्रिन र मधुमेहको औषधि एक मात्रासमेत खान छोड्नु हुन्न।